Junior Accountant(East Dagon Industrial Zone) ﻿
6.5.2021, အချိန်ပြည့် , Construction / Building
ကုမ္ပဏီ: Pluses World Co., Ltd.
• ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
• LCCI Level2ပြီးမြောက်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။
• Computer excel အတန်အသင့် ကျွမ်းကျင်ရမည်။
• အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၁) နှစ် ရှိရမည်။
• Accounting software တစ်ခုခု တတ်မြောက်ထားသူ ဦးစားပေးမည်။
အလုပ်တည်နေရာ No.35, Ground Floor, ZaLon St, Sanchaung Township, Yangon.
For East Dagon Industrial Zone .
7 နေ့များ, အချိန်ပြည့် , 200 000 - 250 000 Ks, Construction / Building
Junior Accountant(East Dagon Industrial Zone) Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Pluses World Co., Ltd. Accountancy Jobs Accountancy Jobs Construction / Building မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်များ၊ ရန်ကုန်ရှိအလုပ်များ
Kayin State 1 နေ့
International6နေ့များ
Rakhine State 117 နေ့များ